Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah | DHAQAN | Caafimaadka Maskaxda Texas
Barnaamijka Kaalmada Nafaqada (SNAP) waa barnaamij dowladeed oo ka caawiya dadka inay iibsadaan cuntada ay u baahan yihiin si ay u helaan caafimaad wanaagsan. Faa’iidooyinka SNAP sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado miraha beeraha. Gargaarka cuntada SNAP waxaa la geliyaa Kaarka Lone Star Card ka dibna waxaa loo isticmaalaa sida kaarka amaahda ama kaarka bangiga ee dukaan kasta oo aqbala SNAP.
SNAP MA QAADAN KARO loo isticmaalo:
alaab aan ahayn cunto ama cabitaan
biilasha cuntada ee taagan
Waxbadan ka baro SNAP
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan xadka dakhliga bishii iyo sida loo dalbado tag
Faa’iidooyinka Cuntada ee SNAP
SNAP ayaa loo heli karaa:
Qoysaska iyo shaqsiyaadka dakhligoodu hooseeyo ama dakhligoodu yar yahay inta ay ka helayaan xeerarka barnaamijka.
Badanaa dadka waaweyn ee jira 18 ilaa 49 oo aan carruur ku haysan guriga waxay qaadan karaan SNAP keliya 3 bilood muddo 3 sano ah. Muddada dheeftu way sii dheeraan kartaa haddii qofku shaqeeyo ugu yaraan 20 saacadood usbuucii ama uu ku jiro barnaamij shaqo ama tababar. Dadka waaweyn qaarkood lagama yaabo inay shaqeeyaan si ay gunooyin u helaan, sida kuwa itaal darrida qaba ama uurka leh.
Badanaa dadka jira 16 ilaa 59 waa inay raacaan qawaaniinta shaqada si ay u helaan dheefaha SNAP. Xeerarkan waxaa ka mid ah in qofku uu shaqo raadsado ama ku jiro barnaamij shaqo oo la ansixiyay. Haddii qofku shaqeeyo, ma joojin karo sabab la’aan.
Haddii aad caawimaad u baahan tahay…
Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama aad wax su’aalo ah ka qabtid arjigaaga, fadlan soo wac lacag la’aan 2-1-1 ama 877-541-7905. Kadib markaad doorato luqad, riix 2. Shaqaalaha ayaa ku caawin kara Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 6 galabnimo